Atemmusɛm a ɛwɔ hɔ ma Israel (1-36)
Hebrini a ɔyɛ akoa (2-11)
Obi a obepira ne yɔnko anaa obekum no (12-27)
Nea ɛfa mmoa ho (28-36)
21 “Atemmusɛm a fa kɔto wɔn anim ni:+ 2 “Sɛ wotɔ Hebrini sɛ akoa a,+ ɔbɛsom wo mfe asia, nanso sɛ mfe asia no so ma afe a ɛto so ason no du a, ɔbɛfa ne ho adi a ɔrentua hwee.+ 3 Sɛ ɔno nkutoo na ɔbae a, ɔno nkutoo na ɔbɛkɔ. Na sɛ ɔne ne yere na ɛbae a, ɔne ne yere no bɛkɔ. 4 Nanso sɛ ne wura ma no ɔbea ware na ɔne no wo mma mmarima anaa mma mmea a, ɛnde ne wura no begye ɔbea no ne mmofra no, na ɔno nkutoo akɔ.+ 5 Na sɛ akoa no ka sɛ, ‘Medɔ me wura ne me yere ne me mma, enti mempɛ ahofadi biara’ a,+ 6 ɛnde ne wura no mfa no mmra nokware Nyankopɔn no anim na ɔmfa no nnyina ɔpon anaa apongua ho. Afei ne wura no mfa ade a wɔde bɔ tokuru mmɔ n’asom tokuru na ɔnyɛ n’akoa afebɔɔ. 7 “Sɛ ɔbarima bi tɔn ne babea sɛ afenaa a, ɔremfi ne wura no nkyɛn nkɔ sɛnea ɔbarima a ɔyɛ akoa kɔ no. 8 Sɛ afenaa no wura ani nnye no ho na ɔmpɛ sɛ ɔfa no sɛ ne mpena* na mmom ɔpɛ sɛ ɔtɔn no ma obi* a, onni hokwan sɛ ɔtɔn no ma ɔhɔho, efisɛ wadaadaa ɔbea no. 9 Na sɛ ɔde no ma ne babarima a, ɛsɛ sɛ ɔyɛ no sɛ ne babea. 10 Sɛ ɔware ɔbea foforo a, ɛnsɛ sɛ ɔtew ne yere a odi kan no aduan ne ne ntama so. Bio nso, ɛsɛ sɛ ɔma no nea ɛsɛ wɔ aware mu.*+ 11 Sɛ wamma no nneɛma abiɛsa yi a, ɛnde ɔbea no bɛfa ne ho adi a ɔrentua sika biara. 12 “Obiara a ɔbɛbɔ obi ama wawu no, wonkum ɔno nso.+ 13 Nanso sɛ wanhyɛ da, na nokware Nyankopɔn no na ɔmaa kwan ma esii a, ɛnde mɛma mo baabi a obeguan akɔ.+ 14 Sɛ obi bo fuw ne yɔnko na ɔhyɛ da kum no a,+ ɛsɛ sɛ wokum no; sɛ ɔwɔ m’afɔremuka ho mpo a, twe no fi hɔ kokum no.+ 15 Obiara a ɔbɛbɔ ne papa anaa ne maame no, wonkum no.+ 16 “Sɛ obi kyere onipa bi sie+ na ɔkɔtɔn no, anaasɛ wokohu onipa no wɔ ne nkyɛn a,+ wonkum nea ɔyɛɛ saa no.+ 17 “Obiara a ɔbɛdome ne papa anaa ne maame* no, wonkum no.+ 18 “Sɛ mmarima reko na ɔbaako de ɔbo anaa ne nsa* bɔ ne yɔnko na sɛ wanwu nanso ɛka no to mpa so a, nea monyɛ ni: 19 Sɛ otumi sɔre de poma nantew fi adi a, ɛnde nea opiraa no no bɛfa ne ho adi. Bere a opirae a wantumi anyɛ adwuma no nkutoo ho mpata na obetua kosi sɛ ne ho bɛtɔ no koraa. 20 “Sɛ obi de abaa bɔ n’akoa anaa n’afenaa ma owu wɔ ne nsam a, ɔno nso ɛsɛ sɛ wokum no.+ 21 Nanso sɛ wanwu wɔ da koro anaa nnanu ntam a, ɛnde wɔrentwe ne wura no aso, efisɛ ɔno ara na ɔtew sika tɔɔ no. 22 “Sɛ mmarima bi reko na wɔkɔpem ɔpemfo ma ɔwo prɛko pɛ*+ nanso owu* amfi mu amma a, ɛsɛ sɛ wogye nea ɔkɔpem no no hɔ mpata biara a ɔbea no kunu bebisa. Ɛsɛ sɛ otua fa atemmufo no so.+ 23 Nanso sɛ owu fi mu ba a, ɛnde momma nkwa nsi nkwa* ananmu,+ 24 aniwa nsi aniwa ananmu, ɛse nsi ɛse ananmu, nsa nsi nsa ananmu, na ɛnan nsi ɛnan ananmu.+ 25 Sɛ obi de ade hye obi oo, opira no oo, ɔhwe no oo, monyɛ no saa bi ntua ka. 26 “Sɛ obi bɔ n’akoa anaa n’afenaa ani ma n’ani no sɛe a, ɛsɛ sɛ ogyaa no ma ɔkɔ de tua n’ani no ka.+ 27 Na sɛ ɔbɔ n’akoa anaa n’afenaa ma ne se tu a, ɛsɛ sɛ ogyaa no ma ɔkɔ de tua ne se no ka. 28 “Sɛ nantwi bi pem ɔbarima anaa ɔbea ma owu a, wonsiw nantwi no abo nkum no,+ na ɛnsɛ sɛ wɔwe ne nam. Ne wura no de, ɔbɛfa no ho adi. 29 Nanso sɛ nantwi bi taa pempem nkurɔfo na wɔaka akyerɛ ne wura, nanso wamma n’ani ankɔ ne ho, na okokum ɔbarima anaa ɔbea bi a, wonsiw nantwi no abo na wonkum ne wura no nso. 30 Sɛ wɔka sɛ ontua agyede* bi a, ɛnde biribiara a wobegye no no, ɛsɛ sɛ otua de gye ne ho nkwa.* 31 Sɛ ɔpem ɔbabarima oo, ɔbabea oo, wɔne nantwi no wura bedi sɛnea atemmusɛm yi kyerɛ. 32 Na sɛ nantwi no pem akoa anaa afenaa a, nantwi no wura betua nnwetɛbona* 30 ama akoa no wura, na wobesiw nantwi no abo akum no. 33 “Sɛ obi bue amoa bi so anaa otu amoa na wankata so, na nantwi anaa afurum bi kɔtɔ mu a, 34 ɛsɛ sɛ amoa no wura no tua nantwi no ka ma aboa no wura.+ Wɔbɛma amoa no wura afa aboa a wawu no. 35 Sɛ obi nantwi kɔpem onipa foforo nantwi ma owu a, wɔntɔn nea onwui no na wɔnkyɛ sika no; afei nantwi a wawu no nso, wɔnkyɛ mu. 36 Nanso sɛ wonim nantwi no sɛ ɔtaa pempem mmoa foforo na sɛ ne wura amma n’ani ankɔ ne ho a, ɔmfa nantwi nsi nantwi no ananmu, na ɔmfa nea wawu no.
^ Nt., “obi gye no.”
^ Kyerɛ sɛ, ɔbarima ne ɔbea nna.
^ Ebetumi nso akyerɛ, “ade.”
^ Nt., “mmofra no fi ba.”
^ Anaa “opira kɛse.”
^ Anaa “ɔkra nsi ɔkra.”
^ Anaa “mpatade.”
^ Anaa “ne kra nkwa.”